Yuu ku dhafoortaabanayaa Kulmiye xadhiga Samafale Coldoon? Yuuse ku raaligalinayaa ? - somalilandlivemedia
20:11 26. April 2017
Wacanoo wanaagsan akhyaareey idil ahaantiinba meel kastoo joogtaan, waxaynu qormadan ku eegi doonaa hadii rabi xukmo wixii inooga suura galnoqda dul istaagida xidhitaanka Samafale Coldoon iyo duruufaha ku xeeran. Waxaynu sidoo kale ka istaagi doonaa ujeedooyinka suuragalka ah ee uu ka leeyahay xisbiga talada haya ee Kulmiye xidhitaankaa Samafalaha.
Waxaynu kaloo eegi doonaa maxkamadaha dalkeena iyo heerbeega cadaalada, inagoo isku dayeyna inaynu jawaab ugu heli karno waa sidee qiimaynta cadaalada maxkamadaha dalkeenu ? ninka xooga lihi iyo miskiinka itaalka yari ma u siman yihiin cadaalada? xukuumada Kulmiye maxay ka qabatay ? Miyey maxkamaduhu ka madaxbanaan yihiin ficil ahaan siyaasada? Maxayse u iilan kartaa xaaladeenu hadiiba sidan cadaalad daradu usii socoto ?
Markaynu u nimaadno maxdaha dalkeena inagoo ka mida wada dunida sadexaad aadna u burburay guud ahaana uu aadka ugu baahay musuqmaasuqu kaas oo ah rukunada ugu waawayn ee ragaadiyey bulshadeena. Meelaha ugu badan ee uu dulmiga, eexda, iyo xoogsheegashadu hoyga u ahna waxaa ka mida golayaashii ahayd in dhankooda loo iirto ee maxkamadaha kala haga dadka.
Waxaa taas tusaale u ah ereybixinada ay ka mid ahaayeen (ku qabso ku qadi mayside) waxaakale oo aad looga cawdaa dacwadaha aan dhamaan ee sanado socda kuwaas oo dadwaynuhu u tibaaxaan inayba mashaariic laga dhigto mashaariicdaas oo labada dhan ee isku haya hadba mawduuc lawada maalo. Eedaasi kumawada socoto dhamaan goloyaasha se waa kuwo badan oo la isla wada ogsoon yahay haayada Garsoorku maaha kuwo wada laaluush qaatayaala se in badan oo ka midi waa carqalad in haysata oo la wada ogyahay. Waxaan ka madax banaanayn sidoo kale siyaasada iyo eexda qabiil.
Coldoon iyo waxa uu inooga dhignaa
Samafale Coldoon oo xawli aad u dheereeya ku soo shaacbaxay mudo kooban waxaynu ku tilmaami karnaa Haayad samafaleed oo dalka ka jirtay, Wuxuu u taagnaa in la maqlo cabashada cida baahan ee aan markaa magacooda iyo muuqooduba daboolnaa. Wuxuu Coldoon ahaa shakhsiyan sida ka muuqatay shakhsi isku kalsoon oo aan ahayn Copy cid ka soo go´ay badina ka hadli jiray uurka ee aan ka hadli jirin afka.
Haduu samafale Coldoon joogi lahaa wadamo kale wuxuu mutaysan lahaa bilad sharafeeda wadanka ugu saraysa wuxuu doono isagoo aaminsan. Waayo ? fikirkiisu waa miduu xor u yahay laakin qofka waxaa lagu qiimeeyaa wax tarkiisa ee laguma qiimeeyo wuxuu aaminsan yahay. Dunida aanu maanta martida u nahay haayadahooda bani aadanimadu waa kuwa ugu badan ee dhaliila siyaasadaha wadamadooda, hadana wax xidha ma jirto waayo? Waa wadamo xuquuq iyo qaanuunku shaqeeyo. Ma ogtahay Islaamiyiinta ugu badani inay joogaan wadamadan la dagaalama Argagixisada waxayna ka sheegana wadamadan waxaanay ka sheegi karin wadamadii ay u dhasheen ee ay ka soo carareen.
Imisaa aqoonyahan dhaliila Reergalbeed iyo siyaasadahooda hadana wax ka dhiga jaamacadaha wadamadan ? Imisaa joogta oo saldhigeedu yahay Haayad aanay raali ka ahayn Xukuumadaha wadamadani ? Dhamaan waxaasi waxay tilmaamayaan heerka u bislaanshiiyahay Dimuquraadiyada iyo qaanuunka. Balse Samafale Coldoon oo aynu odhan karno wuxuu ahaa Haayad khayri ah oo daryeeli jirtay inbadan oo ay gabtay xukuumada uu u xidhan yahay ma ay ahayn in loo xidho fikir siyaasiya oo uu aaminsanyahay ee waxay ahayd in la eego baahida loo qabo isaga oo kale, waxay in la dhiiri galiyo si loogu daydo balse waxa la wadaa waa inaanu noqon iftiin lagu daydo.
Xidhitaanka Samafale Coldoon oo warkiisu aad u faafay noqdayna mid ka wayn intii ay filanayeeen kuwii xidhay, waxaaba la gudoonsiiyey intii uu xidhaa bilado lagu xusaayey waxqabadkiisii oo ay gudoonsiiyeen kuwii iyaga awgood loo xidhay ee Soomaaliyeed. Wuxuu in mudo ah qabsaday baraha bulshadu wararka isku waydaarsato waxaanu noqday qodobka ugu wayn ee dadku ka doodaan in mudo ah badiba dadkaasi waxay u badnaayeen kuwii ku xidhnaa Degelka uu ku leeyahay baraha bulshada ee FB iyo Youtubekaba .
Waxaa Degelkiisa ku xidhan ilaa hada dad kor u dhaafaaya 80,000 oo ruux kuwaas oo ka soo kala jeeda deegaanada Soomaaliyeed oo dhan, shakhsiga saamaynta intaa leeg lihi xidhitaankiisana waxaa looga jeedaa ujeedooyin mug leh. Ta ugu horeysaa waxay noqon kartaa fariin toosa oo loo diraayo madaxweynaha dhawaanta la doortay ee Farmaajo taas oo la rabo in loo diro fariin odhanaysa inaan laga soo dhawaynayn dhinaca xukuumada uu kulmiye hogaamiyo waqtigan.
waxaana si badheedha oo la gabasho lahayn si toosa uga hadlay wax yar ka dib markii la doortay Farmaajo gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee Muuse Biixi oo deedafeeyey farmaajo yidhina Una ducayn mayno Habaarina mayno anagu Farmaajo halka uu dhaliilo la xidhiidho xukuumadii Siyaadna u jeediyey. Iskuwada geeyoo dhamaan arimahaasi waa hadalkaa Muuse iyo xidhitaankaa Samafale Coldoon oo ahaa shakhsigii isla soo sawiray waxay tilmaamayaan fariimo cad oo loo diraayo Farmaajo oo ah You are not Welcome.
Se suaashu waxay tahay Kulmiye isagaaba bilaabay wadahadalada Somaliland iyo Somaliya ee hadiiba madaxii Soomaaliya sidaa ay u sharaysteen siday u suura gal noqon kartaa siiwaditaanka wadahadalada Somaliland iyo Soomaliya ? siday khayr uga filanayaan ninka samafalihii isla sawiray awgii laba sano jeela loo diray waxay ku tusaysaa colaada duugan ee loo hayo maamulkaas Farmaajo oo dhanka Soomaaliya u muuqda mid lagu diirsaday dhankooda.
Dhanka kale waxay xukuumada Kulmiye uga danleedahay si aanu wiilkan yar ee baarcadka noqday aanu saamayn ugu yeelan dhalinta maanta ee dhaxlay aafada ay inoo dhiteeyeen adeeradeen ee ah shaqo la´aan, mustaqbal la´aan, ididiiladii oo luntay iyo dhibaatooyinka kalee tirada badan ee dhalinta haysta kuwaas oo u nugul isbadal iyo kacdoon kastoo loogu yabooho. Waayo? 25 sano oo aan dhana loo kicin dhana loo dhaqaaqin iyo hawo beena iyo wayduushay uun lagu jiray. Aafooyinkaas oo sababi kara kacdoon ay horseedaan dhalinta Somaliland se waxay ku badbaadeen odayaasheenu weli waxa ino furan tahriibkii wadamda Reergalbeed, hadii aanu tahriibkaasi jiri lahayna dhalintu waxay ku kici lahaayeen isla odayaasheena sababta u dhibaatadeenan ina haysata.
Waxay u muuqataa inay salka ku hayso isla Somaliland gudaheeda maadaama uu Samafale Coldoon ka soo jeedo beesha uu Kulmiye badi ku shaanbadeeyo Somaliwaynta badina ka soo jeedaan dadkii horkacaayey fikirkaas. Waana isla beesha uu ka soo jeedo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Wadani , oo dhawaanba ahayd markii xaaladu cirka isku shareertay ee been abuur la soo sameeyey loo eekaysiiyey run iyadoo lagu eedaynaayo inay isla farmaajahaa la kulmeen iyo madax kaleba. tana waxay u dhigantahay fariin dadban oo loo diraayo iyadoo loo adeegsaday habqaanuuneed, waxaanay suaashu tahay hadii Coldoon Gaashaanbuurta ahaan lahaa tan maanta miyey ku dhici lahayd ?
Yaa lagu raaligalinayaa se Xadhiga Samafale Coldoon?
Waxaynu ognahay xidhiidhka inaga dhaxeeya *walaalaheena* Itoobiya iyo siday saamaynta inoogu leeyihiin, waxaynu kaloo ka war qabnaa siduu badiba u dhaliili jiray Coldoon ee uu dibada u soo dhigi jiray wax badan oo xaqiiqooyina oo dawladeenu ka afgobaadsan jirtay xaqiiqooyinkaa badan oo aanay runtii dawladu ku diirsan jirin jeclaysana waxay ahaayeen kuwo aad xasaasi u ah oo aan la rabin in umada lagu wacyi galiyo, halka uu Samafale Coldoon ahaa mid ka gudbay xuduudii xukuumada Somaliland sidaas darteed maadaama marar badan cabashooyin ka yimaadeen waxay u muuqataa doorkan in xidhitaankani aanu ka madhnayn fariin loo diraayo cid kastoo Big Brother wax ka sheegta ama farogalisa xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya.
Xadhiga Samafale Coldoon saamayn taban mise togan.
Wuxuu Samafale Coldoon ku jiraa maanta jeel waxna aynaan ka qaban karin iyadoo loo adeegsaday haayada qaanuuniya wuxuu dhawaan uun la aqal galay marwo uguba waxaa ka danbaysa hooyo iyo reer waxaa kale oo ka sii danbeeya dadkii jilicsanaa ee uu warkooda dibada u diri jiray dhamaan intaasoo dhan oo ku dhibaataysan go´aankaas waxaa ilaahay waydiinayaa cidii xoriyadiisa ka xayuubisay Samafalahaas.
Habeenkasta oo hooyadaa ilmaheeda laga xidhan qalbiga ka oydo waxaa ilmadaasi u taalaa meel madaxyaweynta falkaas ka danbeeyey, habeenkasta oo marwadii saygeedii xalaasha ahaa kali seexato waxaa ilaahay waydiinayaa dulmigaas kuwii ka xidhan ninkeedii. Markasta oo miskiin uu caawin jiray tebo wuxuu fariin u dirayaa eebe isagoo dalbanaya inuu ilaahay usoo dadajiyo jawaab kuwii adoonkii biilin jiray ka xidhay.
Waxba yuu hadalku ila sii durkine Aduunyadu waa giraan wareegta sareeye hoose maanta kuwa u awood sheegtayna ma haystaan awood abadiya se waxaa ka hadhaa waa taariikh haduu nool yahay wuu soo bixi waxayna taariikhdu qori inuu dhacadiisu ahayd mid ka mida kuwii ugu madoobaa ee soo mara dalkeena waxaa intaa ka sii daran hablo loo xidhan inay xidheen duruuc buluuga oo calankii somaliya shabaha waana dhacdooyin aad loogu qoslay oo baraha bulshaduba kaftan ka dhigteen.
Somali wax kastoo dhacay iyagaynu is nahay waxa aynu ku kala tagnay waa siyaasad se waxaynaan ku kala tagi karin baa badan haa oo dulmi gaari wuu inagu dhacay waanay inoo gaysteen ka maamul ahaan se may ahayn ka shicib ahaan sidii wadama qaar ka dhacday. waxay ila tahay inaanay haboonayn in xaal ilaa halkaa inala gaadhaa balse waxay ku haboontahay inuu shaqeeyo caqligu ee aanay shaqayn caadifadu.
Hebel baad isla sawirtay iyo dirac baad xidhatay iyo weli waxaanu kaa urinaynaa inaad aaminsantahay in Somali la midaynkaro waxaasi ma aha wax danbi qof looga dhigo qofku wuxuu aaminaayo isagay jirtaa Somaliland maaha North Korea kuweena inaga fikir duwan iyaba xuquuq bay leyihine halala doodo oo hala isqanciyo, cadaaladana haloo sinaado waxa inaga maqanina weli waa intaas waana waxa qudhee ina wada deeqi kara jamhuuriyadan yar ee barakaysana waynu wada leenahay ee ma kala lihin ama aaminsanow ama ha aamin sanaanin nin kaama xigo waa dalkaagi sida qudhay taasi ku hir gali kartaana waa cadaalad ina midaysa oo waarta in la helo inagoo kala afkaarduwan.
Cadlibaa wax doojee
nin u doonay heliwaa !!
Wabilaahi tawfiiq I.C
Ex Wasiir Cadaani Ayaa Gabyoo Yidhi
Helmut Kohls Raysal Wasaarihii hore ee Dalka Jarmalka oo Geeriyooday
Koox hubeysan oo uu ka dambeeyey Xisbiga KULMIYE, ayaa weerar xooggan oo ay ku soo qaadeen Siyaasi Cali Laangadhe
Murashax C/raxmaan Cirro oo Shacabka Somaliland ugu Hambalyeeyey Curashada Bisha Barakeysan ee Ramadaan
Newer PostYuu u xidhanyahay Coldoon ?Yuuse ka xidhanyahay Coldoon ?
Older Post Nigerian Boko Haram fighters trained in Somalia: president Hassan Sheikh